Android Devices Archives - Technology Khabar
ह्वावेका हालका स्मार्टफोनहरुमा एन्ड्रोइड र गूगलका सेवाहरुको अपडेट निरन्तर पाईने
५ भाद्र २०७७, शुक्रबार
चिनियाँ टेक कम्पनी ह्वावेले आफ्ना हालका सबै स्मार्टफोनहरुमा गूगलको एन्ड्रोयड अपडेटमा कुनै समस्या नरहेको बताएको छ । कम्पनी एन्ड्रोयड सेक्यूरिटी अपडेटका साथै गूगल मोबाइल सर्भिसका सबै सेवाहरु हालका डिभाइसमा उपलब्ध […]
साबधान ! गूगलका कर्मचारीहरुले सुन्छन् तपाईँको स्मार्टफोनको भ्वाइस रेकर्डिंग
२७ असार २०७६, शुक्रबार
काठमाडौं । सर्च इन्जिन कम्पनी गूगलका कर्मचारीहरुले गूगल होम स्मार्ट स्पीकर तथा एन्ड्रोयड स्मार्टफोनको माध्यमबाट यूजर्सको कुराकानी सुन्ने गरेका छन् । बेल्जियमका भाषा वैज्ञानिकहरुले यूजर्सद्धारा बनाईएको रेकर्डिंगको स्निपिट्सको जाँचपछि यो […]
विश्वभरका २ करोड ५० लाख एन्ड्रोयड स्मार्टफोनमा भेटियो ‘एजेन्ट स्मिथ’
काठमाडौं । एन्ड्रोयड स्मार्टफोनमा अधिकांश समय मालवेयरको त्रास हुने गर्दछ । कयौं पटक भाइरस र मालवेयर आएको समाचारहरु आउने गरेका छन् । यस पटक पनि अनुसन्धानकर्ताहरुले नयाँ मालवेयर भेटेका छन् […]
विश्वमा करोडौं एन्ड्रोयड स्मार्टफोन तथा ट्याबलेटमा भाइरस, सबै डाटा चोरी हुनसक्ने
१८ आश्विन २०७२, सोमबार
काठमाडौं, १८ असोज । एन्ड्रोयडमा आधारित विभिन्न डिभाइस प्रयोगगर्ने प्रयोगकर्ताहरु अहिले विश्वभर खतरनाक भाइरसको शिकार भएका छन् । यदि तपाई पनि एन्ड्रोयडमा आधारित स्मार्टफोन वा ट्याबलेट चलाउनुहुन्छ भने होशियार हुनुपर्ने […]
तपाईँको ह्वाट्सएपबाट च्याट डिलिट भयो ? यस्तो छ च्याट रिकभर गर्ने राम्रो तरीका
वाईफाईको पासवर्ड बिर्सिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यो ट्रिकबाट सजिलै पत्ता लगाउनुहोस्
२ आश्विन २०७८, शनिबार
स्मार्टफोनमा आगलागी नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? त्यसोभए यी १० गल्ती कहिल्यै नगर्नुस्
पेन ड्राइभ जस्ता रिमुभेवल मिडियाबाट हुने जोखिम र सुरक्षाका उपयाहरु यस्ता छन्, जानी राखौं
२६ भाद्र २०७८, शनिबार
Next five years crucial for ASEAN digitizing trade and economy: NIKKEI-ISEAS forum
आईएमई मोटर्सले ल्यायो दशैँ तिहारलाई लक्षित योजना
जुकरबर्गलाई बचाउन फेसबुकले एफटीसीलाई अधिक रकम तिरेको शेयरधनीहरुको दाबी
दक्षिण एसियाकै पहिलो उड्ने कार भारतमा बन्दै, हवाइ इन्धन र ब्याट्री दुवैबाट चल्ने
अमेरिकामा सन् २०२४ मा वार्षिक ७० हजार प्रोलग विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने होन्डाको योजना
अब रेल पनि ब्याट्रीबाट चल्ने, वेबटेकद्वारा पहिलो विद्युतीय रेलको अनावरण
टेस्लाद्वारा बर्लिनको गिगाफ्याक्ट्री अनावरण गर्न ‘गिगा फेस्ट’ आयोजना गर्ने